Mampody ny rivotra tsy mahasalama ny vogaga volkanika any amin'ny toeram-pialofana any Maui
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Mampody ny rivotra tsy mahasalama ny vogaga volkanika any amin'ny toeram-pialofana any Maui
Eo ambanin'ny zavona volkano i Maui amin'izao fotoana izao. Ireo mpizahatany mitsidika ny Nosy sy ny morontsirak'i Maui dia mety tsy manana hevitra hoe maninona no manjavozavo amin'izao fotoana izao? Tsy salama toy inona ny rivotra androany any Kihei, Lahaina, ary Kaanapali?
Mety ho taitaitra anio alina ireo mpitantana ny hotely ao Maui, ireo mpitarika ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao Maui, ary ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny faritany Maui any Wailea, Kihei, Lahaina, ary Kaanapali. Hatreto dia toa mangina ny Birao mpitsidika an'i Maui momba ny zava-misy ankehitriny any Maui ary mety ho fantatr'ireo mpizaha tany ihany ny zava-mitranga rehefa manaraka ny vaovao eo an-toerana na mahita ny toetr'andro fa manjavozavo anio tolakandro.
Nilaza ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao Maui vomena hevitra ny isitors mba ho vonona sy hahafantatra ny toe-javatra manodidina azy, sy ny zavatra tsapan'izy ireo na ny mety fihetsiny manoloana ny zavona eny amin'ny rivotra.
Izany rehetra izany dia nitranga iray andro taorian'ny nanamoriana ny fizahan-tany nataon'ny Hawaii Tourism Authority ary koa ny governora Hawaii Ige izay nanome toky ireo mpitsidika an'i Hawaii tsy nisy antony tokony hatahorana na iza na iza na manafoana ny diany mankany Hawaii noho ny fipoahan'ny volokano Kilauea ao amin'ny Nosy Hawaii. Ny kinova ofisialy ho an'ny mpandeha ho avy sy ny mpitsidika amin'izao fotoana izao dia mijanona: Misokatra malalaka amin'ny orinasa i Hawaii.
Ao amin'ny Nosy Hawaii, nisy loza vaovao tonga iray andro taorian'ny nampitandremana ny tompon'andraikitra fa ny lava avy amin'ny volkano Kilauea dia mipoaka ary miraraka amin'ny ranomasina. Izy io dia mamorona zavona fantatra amin'ny hoe "laze" izay misy glasy mikraobazy fitaratra izay mampidi-doza tokoa ny miaina.
Nilaza ny mpitarika ny fizahan-tany any Hawaii fa tsy misy atahorana. Notondroin'izy ireo fa faritra iray tena kely sy lavitra any amin'ny Nosy Hawaii no misy azy. Ny mpizahatany dia tokony hankafy ny torapasika sy ny natiora.
Hatramin'ny maraina teo aloha, ny rivotra varotra dia nitsoka ireto rahona misy poizina ireto tany anaty ranomasina, fa ankehitriny kosa dia nifindra kely ihany ny rivotra varotra. Ny kalitaon'ny rivotra any Hilo amin'ny nosy Hawaii izao dia tsara, ny kalitaon'ny rivotra any Kona ary Waikoloa amin'ny Nosy Hawaii dia azo ekena; na izany aza, ho an'ny loto sasany, dia mety hisy fiahiahy ara-pahasalamana antonony ho an'ny olona vitsy dia vitsy izay mora tohina amin'ny fahalotoan'ny rivotra.
Ny kalitaon'ny rivotra na aiza na aiza ao Oahu, anisan'izany i Waikiki sy i Kauai, dia tena tsara, saingy misy fanairana mangina tonga avy amin'ny nosy iray izay mbola tsy voadona tamin'ny fipoahan'ny volkano, ny Nosy Maui. Miaraka amin'ny habetsahan'ny trano fandraisam-bahiny betsaka indrindra, i Maui ihany koa no vongan-tsolika ho an'ny indostrian'ny fizahantany Hawaii. Ny fikorontanana rehetra dia mety hisy vokany ara-toekarena amin'ny fanjakana Hawaii manontolo.
Air Quality Hawaii YELLOW: Brown antonony: tsy salama ho an'ny sasany
Ny hafatra manaitra kokoa avy any Maui dia ny tsy fahasalamana ho an'ny vondron'olona saro-pady ny kalitaon'ny rivotra any amin'ny faritra fialan-tsasatra roa Kihei sy Kaanapali.
Ny kinova ofisialy: na dia mety tsy ho voakasik'izany aza ny sarambabem-bahoaka amin'ny haben'ny kalitaon'ny rivotra ankehitriny, ireo olona voan'ny havokavoka, ny olon-dehibe ary ny ankizy dia atahorana ho tratry ny ozone, fa ireo olona manana aretim-po sy havokavoka, olon-dehibe efa lehibe. ary ny ankizy dia atahorana kokoa noho ny fisian'ny poti-drivotra.
Ny rivotra volkano dia mitsoka any amin'ny nosy mpifanila vodirindrina amin'i Maui. Izy io dia fantatra amin'ny toetran'ny zavona.
Vog dia endrika iray fandotoana rivotra izay miteraka rehefa dioxide solifara sy gazy ary potika hafa entin'ny volkano mipoaka no mihetsika amin'ny oxygen sy ny hamandoana eo imason'ny tara-masoandro.
Tany Vog hatrizay hatrizay nisian'ny fipoahana voalohany ny volkano Big Island i Vog. Ny zavona dia mety hiteraka asma ary tsy mahazo aina. Ny fisian'ny vog dia olana lehibe kokoa tany Kona nandritra ny taona maro, fa indraindray misy kinova malefaka kokoa azo tsapain-tanana na dia ao amin'ny nosy Oahu aza indraindray aorian'ny fivadihan'ny rivotra. Mampidi-doza toy inona ity zavona ity taorian'ny fipoahan'ny volkano farany teo.
Androany tao Maui dia nandefa hafatra tamin'ny tranokalan'ny departemantan'ny fahasalamana ny tompon'andraikitra:
Raha misy ny toetran'ny zavona, mamporisika anao ny departemanta:
• Ahena ny hetsika ivelany izay miteraka fisefoana mavesatra. Ny fanalavirana ny hetsika ivelany sy ny fanaovana fanatanjahan-tena mandritra ny toetran'ny zavona dia mety hampihena ny fihenan-tsakafo sy hampihena ny risika ara-pahasalamana. Zava-dehibe indrindra izany ho an'ny vondrona saro-pady toy ny ankizy, ny be antitra ary ny olona voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny sohika, bronchitis, emfisema ary havokavoka ary aretim-po.
• Mijanona ao an-trano sy manidy varavarankely sy varavarana. Raha misy «aircon» ampiasaina dia apetraho indray izy io.
• Tehirizo ao an-tanana foana ny fanafody ary ho mora omena. Ny fanafody voatondro isan'andro dia tokony horaisina ara-potoana ary mety hanome fiarovana amin'ny vokatry ny dioksida solifara. Mifandraisa haingana amin'ny dokotera raha misy olana ara-pahasalamana.
• Sorohy ny sigara sy ny setroka faharoa.
• Misotroa tsiranoka betsaka hisorohana ny tsy fahampiana rano.
• Mamolavola drafitra vonjy maika ho an'ny fianakaviana ho fisorohana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fiomanana vonjy maika na hisoratra anarana amin'ny rafitry ny fanairana ao Maka'ala ao amin'ny faritany Maui, dia miantso 808-270-7285 na mitsidika mauicounty.gov/70/Emergency-Management-Agency
Ny vaovao tsara dia amin'ny 655 hariva ny talata ny kalitaon'ny rivotra tao Maui dia niverina ho amin'ny antonony ary nanondro iray hafa tamin'ity indray mitoraka ity ny fiovan'ny rivotra varotra.
Ny eTN dia nanantona ny sampan-draharahan'ny fizahantany Hawaii sy ny biraon'ny Governemanta, saingy tsy nisy valiny azo.